Fampianarana : mpampianatra 87 isaky ny Cisco no horaisina | NewsMada
Fampianarana : mpampianatra 87 isaky ny Cisco no horaisina
Samy nahazo anjara 87 ny Cisco tsirairay manerana ny Nosy, araka ny efa nomarihina alohan’ny nandrafetana ampahibemaso ireo lisitra rehetra manerana ireo Cisco. Misy anefa ireo Cisco izay efa tsy ahitana Enseignant non fonctionnaire (ENF) intsony tao anaty FPE, nanomboka ny 2014.
Notsinjaraina amin’ireo Cisco mbola hahitana ENF maro ny anjara tokony ho an’izy ireo.
Araka ny fandaminana, efa mivoaka ny tetiandro ho an’ny Dren Androy ho an’ny fandrafetana ny lisitr’ireo mpampianatra horaisina ho mpiasam-mpanjakana andiany fahefatra sy ny fizarana « kits enseignants » sy moto ho an’ny Dren sy Cisco ary « tablettes » ho an’ny « CEG de référence » Ambovombe.
Hatao ny 8 febroary izao izany ho an’ny ao Ambovombe. Hitohy ao Tsihombe izany ny 9 febroary ary ao Beloha ny 10 febroary. Hifarana any Bekily ny 11 febroary.
Fanambin’ny minisitera tompon’andraikitra ny fandrafetana ny anaran’izay mpampianatra horaisina ho mpiasam-panjakana ao anatin’ny mangarahara.
Fanamarihana hataon’ny mpanara-baovao kosa anefa, tokony mba ho tena mpampianatra manana ny fahaizana enti-mampianatra no horaisina fa tsy hipetraka an-jambany amin’ny famaritana anjara isaky ny Cisco fotsiny ihany izany.